Dukaan bilaash ah 4mm 6mm 8mm dhul muraayad luul ah silsilad silsilad jilicsan luul dahab luul ah
Beads Miyuki Delica Beads waa muraayad dhululubo oo aad u labisan oo leh afar cabbir iyo tiro badan oo midabo iyo dhammeystir ah. Guluusyada Delica waxay leeyihiin tuubbo ama qaab dhululub ah, oo fidsan oo leh dalool weyn oo u dhigma cabirkooda. Badanaa waxaa loo isticmaalaa farsamooyinka dhogorta ka baxsan ee dharka laga xirto iyo sidoo kale shaqada miisaska jilicsan.
Dahabka dhalada: oo leh midabbo kala duwan iyo cabbirro. Dusha sare ee jilicsan iyo midabka dhalaalaya ayaa ah doorashada ugu fiican ee sameynta dhammaan noocyada dahabka. Qaababka badankood waa wareega, dhibcaha biyaha, badarka bariiska iyo qaababka kale. Qaababka kale waa la habeyn karaa. Qiimaha waa raqiis yahay MOQ-na waa mid hooseeya. Waxaa jeclaaday macaamiisha. Waa mid ka mid ah alaabada ugu muhiimsan ee warshadaha dahabka.
Arimaha u baahan feejignaan
1. Alaabooyinkani dhammaantood waa rinjiyeysnaa oo rinjiyeeyaa. Maaha midabka gadhka laftooda. Waqti dheer kadib, waxaa jiri doona xoogaa wasakh ah ama dhibic rinji ah dusha sare sababtuna waa kala go'ida awgeed.
2. Qaabka badeecada noocan ahi waa mid iska caadi ah. Qaar baa xoogaa yar. Fadlan taxaddar si aad uga hortagto carruurta inay liqaan. Isku day inaad ka fogaato meel carruurtu gaarto.
Goobta asal ahaan Zhejiang, Shiinaha
Magaca Astaanta JC krist
Nambarka Model JC20190117183A
Nooc Dahab ah oo jilicsan Dareenka (shaybaadh ayaa la abuuray)
Qalabka Dahabka ah Daabacaadda Pearl
Midabka Pearls Fadlan tixraac kaarka midabka
Cabbirka Jajabka 2mm-25mm
Waxyaabaha Dhalada luul
Midab Xoog leh, inka badan 60 nooc oo midabyo ah
Cabbirka 2mm, 3mm, 4mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 16mm
Nooca Pearl Wareeg Wareeg ah
Isticmaalka Qalabka Gargaarka
Bixinta T / T, L / C, Paypal, Galbeedka Unoin
Nooca Dahabka ah Beads Strand Beads
Iibinta Cutubyada: Shayga kaligiis ah
Cabbirka xirmo oo keliya: 40X30X20 cm
Miisaanka guud oo dhan: 1.600 kg
Guluubka buluuga ah waxaa lagu heli karaa tiro aan dhammaad lahayn oo ah qaabab, cabirro iyo midabo loo adeegsan karo siyaabo kala duwan.
Round Beads iyo Rondelles ayaa ah waxyaabaha inta badan la dalbado oo leh god. Soo-jeedinta ugu weyn waxaa lagu dhammaystiray xariiq qaab-dhismeedka xiisaha leh oo lagu dari karo tiro aan dhammaad lahayn oo kaladuwanaansho ah. Guluubyadeena buluugga ah ayaa loo isticmaali karaa soosaarista dharka qurxinta iyo sidoo kale alaabada kale ee isbeddelada sida alaabada, qurxinta dharka, dharka qurxinta iwm.
* Naqshado kala duwan oo casriyeysan.
* Qiimaha ugufiican iyo gaarsiinta nabdoonaanta ee aaminka ah kuna saleysan tayada aad u baahan tahay.
* Iibinta qanacsanaanta iyo adeegga iibinta ka dib.
waxaa loo isticmaalay dharka iyo waxyaabaha farshaxanka leh, qurxinta daahyada daahyada, qurxinta guriga iyo qurxinta kale ee munaasabadaha, sidoo kale caan ku ah agabka dahabka
Hore: Jabuutyo dhalaalaya oo tayo sare leh oo dhalaalaya MIYUKI delica beads 11/0 ee samaynta dharka qurxinta dharka
Xiga: Nail tayo sare leh oo gadaal ah oo quraarad ah oo aan lahayn xarkaha ciribta dhagaxa kulul
Koofiyadaha iyo Burumaha
Beads Pearl Kalabar
Bear Dahab ah oo Fiican